Booker Prize Nominated Author Dangarembga Arrested in Zimbabwe - allAfrica.com
Three days after Tsitsi Dangarembga was nominated for the Booker Prize longlist on July 28 with her latest novel, This Mournable Body, she was arrested while peacefully protesting against corruption and the deteriorating political and economic situation in Zimbabwe. Now, she has made it onto the UK's leading literary award's shortlist - three days before her trial is set to begin. Over 100 African writers have since called on the AU and SADC to end their silence and suspend Zimbabwe, accusing President Emmerson Mnangagwa's government of being violent and willing to do anything to stay in power.
Internationally-acclaimed and award-winning novelist and filmmaker Tsitsi Dangarembga has been shortlisted for the 2020 Booker Prize for Fiction for her latest literary work, The… Read more »
The Conversation Africa, 20 August 2020
Tsitsi Dangarembga has made a name for herself as a writer, filmmaker and activist in Zimbabwe. She gained international acclaim with her debut novel Nervous Conditions (1988),… Read more »
HRW, 9 September 2020
Human Rights Abuses Under ZANU-PF Have Soared During Country's Crisis Read more »
Zimbabwe: South Africa Should Press Zimbabwe to End Repression - Watchdog
New Zimbabwe, 11 September 2020
A high-level delegation from South Africa has been dispatched to Zimbabwe to try to find a solution to the country's escalating economic and political crisis. Read more »
Over a hundred African writers are calling on the AU and SADC to end their silence and suspend Zimbabwe, accusing President Emmerson Mnangagwa's government of being violent and ... Read more »
Novelist and filmmaker Tsitsi Dangarembga (file photo).